..........: အာကီဒို ( AKIDO 3D LEARNING SOFTWARE & CRACK )
အာကီဒို ( AKIDO 3D LEARNING SOFTWARE & CRACK )
အခု ကျွန်တော်တင်ဆက်မှာကတော့ .. အာကီဒို 3D အခွေဖြစ်ပါတယ် .. သူက ကွန်ပြူတာမှာ program လို ပဲ install လုပ်ပြီးတော့ technique တွေကို လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ် .. တော်တော်လေးကို ပြီးပြည့်စုံပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ software လို့ တောင်ပြောလို့ရပါတယ် .. လိုချင်ရင် အောက်မှာဒေါင်းသွားပါ ..
Aikido 3D Learning Software
Mediafire Link ( http://www.mediafire.com/?iyrzgyyzkrj )
Ifile.it Link ( http://ifile.it/3gsnizy )
Crack File ဖြည်နည်း PDF file
Mediafire Link ( http://www.mediafire.com/?cxpazy3bdvgsh21 )
Ifile.it Link ( http://ifile.it/2gmx0uq )
သူ့ရဲ့ Crack ဖြည်နည်းက ရှင်းပြဖို့လိုပါမယ် .. မဟုတ်ရင် လည်နေမှာစိုးလို့ပါ .. Crack မဖြည်ခင် Connection ကို Disconnect လုပ်ထားပါ . ပထမဆုံး folder တစ်ခု ထဲမှာ Download လုပ်လို့ ရလာတဲ့ Aikido 3D.rar ကို ခုလိုမျိုးလေး ဖြည်ချလိုက်ပါတယ် ... ပြီးတော့ အောက်ပါအဆင့်များအတိုင်း Install လုပ်လိုက်ပါတယ် ...
အခု security key ကို တောင်းနေပါပြီ .... ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ OK ကို ရွေးလိုက်ရင် ခုလိုပေါ်လာပါမယ် ..
Step1 : Finger Print Cracking
အဲ့ဒီမှာ Hardware Fingerprint : 689D-595E လို့ရေးထားတာကို တွေ့တယ်မဟုတ်လား .. အဲ့ဒီဥစ္စာက အမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတယ် .. ခင်ဗျားတို့ install လုပ်ရင် အဲ့ဂဏန်းဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်မယ် ... အဲ့ဒီ ဂဏန်းတွေကို ခုလိုမျိုးပြောင်းလဲရပါမယ် .. ( eg . 689D-595E ) ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့က နောက်ကနေ နှစ်လုံးတစ်တွဲ ပြန်စီပေးရပါမယ် .. ခုလိုလေးပြန်ရေးရမှာပေါ့ ..
( 689D-595E >>> 5E599D68 ) ပြန်ရေးတဲ့ အခါ " - " မပါတော့တာကို သတိပြုပါနော် .. ^_^
Step2 : WinHex Key Gen Cracking
အခု WinHex Key Gen Folder ကို သုံးပြီးတော့ Crack စဖြည်ပါတော့မယ် .. အောက်ပါတိုင်းလေးလိုက်လုပ်ပါ ..
ခုနက aikido 3d software ကို ကျွန်တော်တို့ finger print နေရာမှာ ဘာမှဆက်မလုပ်ပဲထားလို့ aikido 3d က run နေတုန်းပါပဲ .. ဒါကြောင့် အပေါ်ကပုံက button ကိုနှိပ်တဲ့အခါ .. ခုလိုပေါ်လာမှာပါ ..
အောက်ကပုံက Menu Bar မှာ Search Menu / Replace ထဲကို ၀င်ပြီးတော့ Replace Hex Values ( CTRL+ALT+H ) ကို ရွေးပြီး အောက်ပါအတိုင်းဖြည့်ပါမယ် .. ( Enter Key Box ထဲမှာစာရေးထားတာက မြင်သာအောင်ပါ .. အဲ့နေရာမှာထည့်ဖို့မဟုတ်ပါ .. တစ်ကယ်ထည့်ရမှာက search for နဲ့ replace with ဖြစ်ပါတယ် )
Search For နေရာမှာ ခုနက Finger Print ID ကို ပြောင်းပြန်လှန်ထားတဲ့ Number ကိုထည့်ပြီး
Replace With မှာတေ့ာ ပုံထဲက Key နေရာမှာထည့်ထားတဲ့ Number ( 47CD1C77 ) ပုံသေပါပဲ .. ခုလိုလေးထည့်လိုက်မယ်..
ပြီးရင် OK ပေါ့ .. ဒါဆိုရင် .. နောက်ဆုံးအဆင့်ပဲကျန်တော့တယ် .. လွယ်လွယ်လေးပါ ..
Step3 : Serial Key ဖြည့်ခြင်း
အခု နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Serial Key မှာ အောက်ပါ အတိုင်း ပုံသေ ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ..
Name : Francisco Bonilla
Key : 0KMDEK-QY5CXH-YR0K0J-29N86B
ဒါဆိုရင် ပြီးပါပြီခင်ဗျ .. အားလုံး အဆင်ပြေကြပါစေဗျာ .... ^_^ ဒီ Crack ဖြည်နည်းကို ကူးချင်ရင် Misrosoft word ထဲကို CTRL+C / CTRL+V ( သို့ ) Print Screen ဖမ်းပြီးတော့ ကူးသွားလို့ရပါတယ် ... PDF ကို တော့နောက်မှ တင်ပေးပါ့မယ် ...
လေးစားလျှက် .................. ( ပုံ / မြွေ )
Karate - 100 Deadliest Karate Moves
JUDO TRAINING PHOTO
Muay Thai ( ထိုင်းလက်ဝှေ့ )
TaeKwonDo ( တိုက်ကွမ်ဒို )
Autocad 2011 Portable (အင်စတောလုပ်စရာမလို)
AutoCAD 2010 + Solid Work 2004 ( Software ; Portab...
AutoCAD 2007 Portable ( install လုပ်ရန်မလို .exe f...
ဆရာရောဘတ်ရဲ့ Autocad 3d modelling(မြန်မာ Ebook)
Autocad 2010 new feature & other( မြန်မာလို)
AutoCAD 2D ဆွဲနည်း ( Myanmar Version )